अदृश्य क्यामेराको साथ Honor को प्रोटोटाइप समस्या छ Androidsis
ऑनर अदृश्य अन-स्क्रिन क्यामेराको साथ यसको प्रोटोटाइपको साथ समस्या अनुभव गर्दैछ
स्मार्टफोनको संसारमा अर्को एक प्रचलनहरूको कार्यान्वयन हुनेछ अन-स्क्रीन क्यामेरा सेन्सर। जबकि कसैलाई लाग्ला कि यो स्क्रिन होलहरू जस्तै छ, यो होईन।
टेक्नोलोजी आधारभूत रूपमा क्यामेराको हराउने र देखा पर्ने हरेक पटक यसको आवश्यकको बारेमा कुरा गर्दछ, त्यसैले प्रयोगकर्ताले पप-अप वा घुमाउने क्यामेराको प्रयोग बिना पूर्ण दृश्य अनुभव अनुभव गर्दछ, र सम्मान यो कम्पनीहरु मध्ये एक हुनेछ कि यो अर्को नवीनता संग एक मोबाइल शुरू गर्न को लागी चयन हुनेछ, सामसु like जस्तै, जसले यो पहिले नै पुष्टि गर्यो कि यो यसमा छ। तथापि, अहिलेको लागि, तपाईं आफ्नो परीक्षण उपकरण संग केहि समस्याहरु छन्.
उक्त जानकारी भर्खरको अन्तर्वार्तामा मानद राष्ट्रपति झाओ मिingले आफैंले खुलासा गरे। यसमा, उनले अन-स्क्रिन क्यामेरा टेक्नोलोजीको विकास र यससँगै एक उपकरण प्रोटोटाइपको विकास, साथै टर्मिनलमा कार्यान्वयन हालै प्रस्तुत गर्दै आएका समस्याहरूको पनि पुष्टि गरे।
आदर लोगो, हुआवेईको सब-ब्रान्ड
सम्बन्धमा, उनले त्यो घोषणा गरे कम्पनीको केही मोबाइलहरूमा देखा पर्नु अघि प्रविधिको विकासमा अभाव हुन सक्छ। यद्यपि उनी विश्वास गर्दछन् कि यो सफल हुनेछ र यो सम्भव छ कि निकट भविष्यमा यो ब्रान्डको केहि मोबाइलहरु द्वारा देखाईनेछ। यसैबीच, हामी। मा उनको समान नमूना फेला पार्न सक्छौं ग्यालेक्सी S10 र मा 20 प्रो आदर गर्नुहोस्, जो लुकेको छैन।
यो देख्न रोचक हुनेछ कि हौंर कसरी यसको बारेमा यसको मुद्दा समाधान गर्छ र भविष्यमा यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने अन्त्य हुन्छ, साथै कुन मोबाइलहरूमा। अहिलेको लागि, हामी आशा गर्दछौं कि तिनीहरू केवल उच्च प्रदर्शन स्मार्टफोनमा आउने छन् मध्य-दायरा र कम-अन्त उपकरणहरूमा होइन। अर्को शब्दहरूमा, प्रारम्भिक चरणमा, केवल फ्लगशिपहरूले नयाँ अदृश्य अन-स्क्रिन क्यामेरा टेक्नोलोजी बोक्नेछ.
सियाओमी र ओप्पोले हामीलाई देखाउँछन् कसरी फ्रन्ट क्यामेरा स्क्रिनको अन्तर्गत काम गर्दछ [भिडियो]
अन्तमा, हनर र सामसु Samsungको अतिरिक्त, Xiaomi y OPPO दुई अन्य फर्महरू पनि छन् जुन यसमा काम गर्दैछन्। यो देख्न बाँकी छ कि कुन अन्य निर्माणकर्ताहरू दौडमा सामेल हुन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » ऑनर अदृश्य अन-स्क्रिन क्यामेराको साथ यसको प्रोटोटाइपको साथ समस्या अनुभव गर्दैछ
नोकिया .6.2.२ यो अर्को जून6मा सुरू गरिनेछ
वनप्लस for का लागि बढि समस्याहरू: टच इनपुट कुनाहरूमा जानु हुँदैन